दाजु विजय र भाई संगम को ज्या* न जानु पहिले ब्रर्त'बन्ध मा परिवारको खुसी हेर्नुस - Public 24Khabar
Home News दाजु विजय र भाई संगम को ज्या* न जानु पहिले ब्रर्त’बन्ध मा...
दाजु विजय र भाई संगम को ज्या* न जानु पहिले ब्रर्त’बन्ध मा परिवारको खुसी हेर्नुस
टिकटकमा छाएका बलिउडका यी ८ सेलिब्रेटी : कस्काे फलोअर्स कति ?
पछिल्लो समय टिकटकले निकै चर्चा पाएको छ । टिकटकमा बलिउड देखि हलिउडसम्मका कलाकारसमेत जोडिएका छन् । भारतमा करिब दुई महिनाबाट लकडाउन जारी छ । यो लकडाउनको अवधिमा कलाकारका लागि समय बिताउन टिकटक अझ प्रभावशाली माध्यम बनेको छ ।
अभिनेता टाइगर श्रफ र साहिद कपुर पनि टिकटकमा पछिल्लो समय व्यस्त रहेने गरेका छन् । अहिलेसम्म १७ वटा भिडियो हालेका टाइगर फलोअर्सका हिसाबले कार्तिक आर्यनभन्दा निकै माथि छन् । टाइगरलाई अहिलेसम्म ६७ लाखले फलो गरिसकेका छन् । उनी लकडाउनमा पनि टिकटकमा सक्रिय देखिएका छन् । उनले अढाइ वर्षअघि नै टिकटकको एकाउन्ट खोलेका थिए ।
यस्तै, अभिनेता साहिद कपुरको पनि टिकटकमा बेला बेलामा देखिने गरेका छन् । उनले अहिलेसम्म आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा ६ वटा भिडियो हालका छन् । उनले सन् २०१८ फेब्रुअरीमा टिकटक एकाउन्ट खोलेका थिए । उनको फलोअर्स ९ लाख २५ हजार रहेको छ । तर, उनले दुई वर्ष यताबाट टिकटकमा भिडियो हालेका छैनन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बलिउडका अभिनेताहरूमध्ये टिकटकमा सबैभन्दा बढी व्यस्त अभिनेता कार्तिक आर्यन देखिएका छन् । उनले हालसम्म २३ वटा टिकटक भिडियो हालेका छन् । उनको फलोअर्स २६ लाख रहेका छन् । उनले ६ महिनाअघि टिकटकको एकाउन्ट खोलेका थिए।
यस्तै, बलिउड अभिनेत्रीहरूमा पनि टिकटकको क्रेज देखिएको छ । अभिनेत्री दीपिका पादुकोन, श्रद्धा कपुर, सनी लियोनी, जैकलिन फर्नाडिज, दिशा पटानी पनि टिकटक सक्रिय छन् ।
टिकटकमा सक्रिय अर्की बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको पनि फलोअर्स ६८ लाख रहेको छ । अभिनेत्री दीपिकाले ६ महिनाअघि टिकटक एकाउन्ट खोलेकी हुन् । यी अभिनेत्रीले अहिलेसम्म आफ्नो एकाउन्टमा ४० वटा भिडियो राखेकी छन् । केही भिडियो फिल्मसँग सम्बन्धित पनि छन् ।
यस्तै, अभिनेत्री सनी लियोनी पनि टिकटकमा सक्रिय अभिनेत्रीको रूपमा पर्छिन् । यी पूर्वपोर्न स्टार अभिनेत्रीले अहिलेसम्म टिकटक एकाउन्टमा ८३ वटा भिडियो राखिसकेकी छन् । उनका पनि हरेक प्रकारका भिडियो छन् । यी अभिनेत्रीको टिकटकमा ६६ लाख फलोअर्स रहेका छन् ।
यी अभिनेत्रीमध्ये जैकलिन फर्नाडिजको आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा ५९ वटा भिडियो हालेकी छन् । उनलाई टिकटकमा फलो गर्ने १ करोड ३६ लाख पुगेका छन् । फिल्मको सुटिङ, पार्टी तथा समारोह, पारिवारिक भेटघाटदेखि एक्लै बस्दाको अवस्थामा समेत उनले भिडियो बताएर टिकटकमा राखेकी छन् ।
अर्की अभिनेत्री श्रद्धा कपुर पनि टिकटकमा छिन् । तर, अरू अभिनेत्रीजस्तो श्रद्धा टिकटकमा सक्रिय छैनन् । यद्यपि, उनको आफ्नो एकाउन्टमा चारवटा भिडियो राखेकी छन् । अभिनेत्री श्रद्धाको २८ लाख रहेका छन् । उनले सन् २०१८ जनवरीमै टिकटक एकाउन्ट खोलेकी हुन् ।
बलिउड अभिनेत्रीहरूमा टिकटकमा रहेकी अर्की अभिनेत्री दिशा पटानी हुन् । अभिनेत्री पटानीको टिकटक एकाउन्टमा १६ वटा भिडियो रहेको छ । लकडाउनका बेला पनि उनले केही भिडियो आफ्नो एकाउन्टमा राखेकी छन् ।
अभिनेत्री पटानीका ४१ लाख फलोअर्स रहेका छन् । अढाइ वर्षअघि नै टिकटक एकाउन्ट खोलेकी यी अभिनेत्रीले सुरुका दिनमा भने टिकटकमा त्यति सक्रियता देखाएको थिइनन् । उनी पछिल्लो सयम टिकटकमा बाक्लै देखिने गरेका छन् ।
Previous articleबिदेशी खेलाडीको नेपालमा हरि*बिजोक ! रुदै मागे नेपालीसंग सहयोग, नेपाली केटिसंगै बिहे गर्छू | भोक*भोकै (भिडियो हेर्नुहोस्)
Next articleयसरि सोझोपनको फाइदा उठाएर सा च्चैको बिहेको नाट* क गरिएको भनीएका सम्पर्कमा